Nosamborina ny Lehiben’ny Hetsika “Bersih” Manohitra ny Kolikoly ao Malezia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Novambra 2016 5:25 GMT
Nikarakara hetsi-panoherana saimbôlika ireo mpikatroka Maleziana sy mpanohana ny hetsika Bersih ( ‘Bersih’ dia teny Bahasa midika hoe madio na fanavaozana) tato anatin'ny andro vitsivitsy mba hitaky ny famotsorana ny filohan'ny Bersih Maria Chin Abdullah.
Nanomboka tamin'ny herintaona, nitaky ny fialàn'i Najib, izay efa voarohirohy tamin'ny raharahan-kolikoly [mg] maro ny Bersih.
Mampiasa ny tenirohy #BebasMaria (Avotsory i Maria) sy #MansuhSOSMA (Foany ny SOSMA) ny mpikatroka mba hampiely vaovao momba ny fanentanana.
Nilahatra tao ivelan'ny foiben'ny polisy federaly ny mpikambana ao amin'ny Parlemanta mba hiampangana ny herisetra sy ny fanagadrana mpitarika mpanohitra:
Nilahatra tao amin'ny foiben'ny polisy niainga tao amin'ny Parlemanta ny solombavambahoaka mpanohitra mitaky fiafaran'ny “herisetra” mihatra amin'ny solombavambahoaka. Ary mitaky ny famotsorana an'i @mariachin ihany koa.
Tsy tao aho androany alina saingy maro kokoa no natao ho an'ny #bebasmaria. Hotahian’ Andriamanitra izy ireo.
#women4maria tsy momba ny olona iray ihany izany. Raha managadra olona 1 ianao, mitsangana ny ambiny eo aminay #BebasMaria #MansuhSosma